कोरोना संकटमा पढाइकै चिन्ता : ११ को परीक्षा दिन नपाउँदै १२ को अनलाइन कक्षामा करिश्मा मानन्धर ! – live 60media
कोरोना संकटमा पढाइकै चिन्ता : ११ को परीक्षा दिन नपाउँदै १२ को अनलाइन कक्षामा करिश्मा मानन्धर !
काठमाडौं। कोरोनाभाइरस संक्रमणको त्रासले सरकारले लकडाउन घोषणा गर्‍यो । आमनेपालीहरूले जस्तै करिश्मा मानन्धर पनि गोदावरीको टौखेलस्थित आफ्नै घरमा समय कटाइन् । ८ महिना लामो लकडाउन अहिले भने खुलेको छ । समय पुरानै लयमा फर्किन खोजिरहेको छ।
८६ वर्षकी सासूआमा, श्रीमान् विनोद मानन्धर तथा छोरी कवितासँग लकडाउनमा घरमै समय कटाइरहेकी करिश्माले लकडाउन खुलेसँगै अभिनयका कामहरूलाई शुरू गरेकी छिन् । उनको हातमा अहिले ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो छन् । उनले केही समयअघि मात्रै राजेश हमालसँग जोडी बाँधेर म्युजिक भिडियो गरेकी थिइन्।
हाल उनको अभिनय रहेको म्युजिक भिडियोहरू धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, कुनै चलचित्रमा आबद्ध भने अहिलेसम्म भइसकेकी छैनन् । करिश्मा भन्छिन्, ‘अहिले तपाईंसँग कुरा हुँदा पनि एक गीतको छायांकनमा व्यस्त छु । अब चलचित्रको काम त कोरोनाको अवस्था के हुन्छ त्यसपछि मात्रै थाहा होला ।’ करिश्माले लकडाउनको समयमा घरमा बस्दा धेरै कुरा सिकेको प्रतिक्रिया दिइन्।
खाना बनाउने, घर सफा गर्ने तथा विभिन्न क्रिएटिभ कामसँगै नजिकका आफ्ना आफन्त तथा परिवारका सदस्यसँग मज्जाले समय कटाउन पाएकोमा उनी खुशी भइन् । करिश्मा भन्छिन्, ‘तर, अध्ययनमा भने कोरोनाले धेरै प्रभाव पार्‍यो । अब डिस्टर्ब भएको अध्ययनलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ ।’ हाल करिश्मा ललितपुर गोदावरीस्थित टौखेल क्षेत्रमा रहेको किटिनी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययन गरिरहेकी छिन् । तर, कक्षा ११ को फाइनल परीक्षा भने दिन पाएकी छैनन्।
भन्छिन्, ‘१२ को अनलाइन कक्षा भइरहेको छ । ११ को परीक्षा नजिकै आइसकेको छ । अहिले अध्ययनमा निकै व्यस्त छु ।’ हाल राजनीतिभन्दा चलचित्रका काम र अध्ययनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको करिश्माले प्रतिक्रिया दिइन् । उनले थपिन्, ‘अब बिस्तारै अध्ययनलाई स्पिड दिने र चलचित्रका कामहरू पनि गर्दै जाने योजना गराएकी छु।’
कक्षा १२ मा पुगेपनि उनले कक्षा ज्वाइन भने गर्न पाएकी छैनन् । अब कोरोनाको औ’षधि नआउँदासम्म अध्ययनमा निकै डिस्टर्ब होला जस्तो छ, उनले थपिन्, ‘तर, अब कोरोनासँग जोगिएर आफ्ना कामहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ करिश्माले लामो समयदेखि रोकिएको अध्ययन कक्षा ८ बाट पुन शुरू गरेकी थिइन् । उनले अध्ययन शुरू गरेसँगै धेरै आश्चर्यचकित भएका थिए । करिश्माको अठोट छ, ‘अरू जे होस्, अब अध्ययन रोकिनेवाला छैन।’
← खानेपानी मन्त्री बिना मगर विहीबार गृहनगर आउँदै –
श्वेताले बिहे गरेपछि विबाह गर्ने मुडमा रेखा थापा, को होलान् उनका हुनेवाला पति ? →